System ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဆင့် 1 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / အုပ်ချုပ်သူ|ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု / System ကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဆင့် 1 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်
ယာကုပ် ဧပြီလ 7, 2016 အုပ်ချုပ်သူ|ဧည့်ဝန်ဆောင်မှု 1 မှတ်ချက် 819 views
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များအပေါ် Created အဆင့်မြင့်မေးမြန်းချက်
Sybase အလိုက်ဆာဗာလုပ်ငန်း Sybase ပါဝါ Builder Crystal အစီရင်ခံစာများနှင့် Ghostscript သုံးပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအတွက်သင်တန်းများပေး
ကုမ္ပဏီ USD3B တန်ဖိုးခြုံငုံစီမံကိန်းကိုနှင့်အတူမျိုးစုံတာဝါတိုင်ဆောက်လုပ်နေသည်
စီမံကိန်းကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေ post ကိုဆုချီးမြှင့်စီမံကိန်းကိုသတ်မှတ်ချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်အများဆုံးကုန်ကျထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ပေးထုတ်ကုန်များနှင့်တပ်ဆင်နည်းလမ်းသင့်လျော်သောရောနှောပေး
အတိုင်ပင်ခံနှင့် တွဲဖက်. FM ရေတွဲဖက်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးမှနောက်ဆက်တွဲလက်ချွတ်အားလုံးလိုအပ်သောဒီဇိုင်းရေးဆွဲနှင့်ထုတ်ကုန်တင်ပြသူနှင့်အချိန်ဇယားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်
စီမံကိန်းကိုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အန္တရာယ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်စီစဉ်ဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်သတ်မှတ်ချက်များအပေါင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော codes တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဝအတွက်အသုံးပြုရန် start-up နှင့်ကုန်ပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းများစီမံကိန်းမန်နေဂျာနှင့် system အထူးကုများကိုအတည်ပြု
စီမံကိန်းကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များနှင့်ပြင်ပတွင်ပေးသွင်း၏သငျ့လျြောသောအမျိုးအစားများနှင့်အရေအတွက်ကို Select လုပ်ပါ
အင်ဂျင်နီယာတွက်ချက်မှု Completing နှင့်အတည်ပြု
အသံချဲ့စက်ပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာနည်းပညာအဖွဲ့က join ဖို့အရည်အချင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်ရှာဖွေနေသည်
သငျသညျစေလွှတ်မန်နေဂျင်းဒီဇိုင်းနှင့်အသံချဲ့စက် s ကိုကို web နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ယူပါလိမ့်မည်
9 အမေဇုံ s ကို EC2 အတွက်ပွင့်နေချိန်
configure လုပ်ပြီးထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့်ကိုဆာဗာများနှင့်သိုလှောင် Hardware နဲ့ application များ install လုပ်ခြင်း
အဆင့်ပေး2ဝန်ဆောင်မှုစားပွဲပေါ်မှာ L1 နှင့်အင်ဂျင်နီယာများကဆိုးရွားလာခဲ့သည်ပြဿနာများအတွက်အထောက်အပံ့နှင့်အမြန် resolution ကို
Active Directory မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Exchange Virtualization နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ Applications ကို၏ဧရိယာများတွင်ကျွမ်းကျင်သူကျွမ်းကျင်မှုများကို
ဟာ့ဒ်ဝဲ operating system နဲ့ဆက်စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံထဲမှာရှုပ်ထွေးပြီး Multi-ရောင်းချသူသည့်စနစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဘို့အချိန်မီထုံးစံ၌ဖြေရှင်းချက် troubleshoot နှင့်ပေး
ကုမ္ပဏီ s ကိုပြောင်းလဲမှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအောက်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီအပြင်ဘက်တက်ကြွတဲ့, reactive အဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖျော်ဖြေ
24 တောင်းဆိုနေတာရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစနစ်များနှင့်ကွန်ယက်ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်×7 အသုံးပြုနိုင်မှု
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း SLA ပစ်မှတ်တွေ့ဆုံအာမခံရကြလိမ့်မည်သူသည်အခြေခံအဆောက်အဦများအတွင်းဆက်လက်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖွင့်ဖို့နည်းပညာဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရကြလိမ့်မည်
အလှူငှပေး Related ခံမှု၏ဒေသများ
အသစ်ကပြန်လည်တည်ဆောက်တည်ဆဲဆာဗာများကို Install လုပ်ပြီးဟာ့ဒ်ဝဲအရံပစ္စည်းန်ဆောင်မှုများ setting များ directory များသိုလှောင်မှုစသည်တို့ configure
တပ်ဆင်နှင့် configuration လုပျထုံးလုပျနညျးဖွံ့ဖြိုးထိန်းသိမ်းနည်း
စနစ်ကအခြေခံအဆောက်အဦဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ access ကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသည်အသုံးပြုသူများသူများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် system ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များဖွင့်လှစ်မည်
ရောင်းချသူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုစမ်းသပ်အကဲဖြတ်လုပ်ပြီး install တိုးမြှင့်မှုများဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အသစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသူများနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုစနစ်
စစ်ဆင်ရေးနဲ့ Maintenance ပံ့ပိုးမှု
စနစ်ကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် tuning troubleshooting စနစ်ကဟာ့ဒ်ဝဲဆော့ဖျဝဲကွန်ရက်များနှင့် operating system ကိုဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် system ကို performance ကိုထိန်းသိမ်းထား
ရောင်းချသူမှမြင့်တက်လျှောက်လွှာပြဿနာများစမ်းသပ် system ကိုဝန်စိတ်ဖိစီးမှုဒီဇိုင်းနှင့် running
လိုအပ်သောအဖြစ်ပုံမှန်ဖိုင် Archive နှင့်ရှင်းလင်းမှုလုပ်ဆောင်
ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီး. တောင်းဆိုမှုကိုနှုန်းအသုံးပြုသူအကောင့်ကိုဖျက်ပစ်
အမျိုးမျိုးသောမဲဆန္ဒနယ်ကနေအဆင့်တောင်းဆိုမှုကိုနှုန်း II ကိုအခြားအထောက်အကူပြုပေး
Coordinate နှင့် Impact မဲဆန္ဒနယ်နှငျ့ဆကျသှယျ
အဖွဲ့အစည်းက s ကိုတနျဖိုးလျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်
ပုံမှန် OS ကိုပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အဆင့်မြှင့် Apply နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကိရိယာများနှင့် utilities upgrade
လိုအပ်သောအဖြစ်အသစ်သောဝန်ဆောင်မှုများကို add configure
လိုအပ်သောအဖြစ် On-သွားစွမ်းဆောင်ရည် tuning ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မြှင့်နှင့်သယံဇာတ optimization Perform
လိုအပ်သောအဖြစ် CPU ကို memory နဲ့ disk ကို partitions ကို configure
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဆိုပါစနစ်များ Applications ကိုရေးအဖွဲ့၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းထုတ်ကုန်အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် support နှင့်မဟာဗျူဟာအကောင့်သို့ဝန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း၏အချက်ပွားဖို့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကူညီကြလိမ့်မည်
တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖောက်သည်တွေနဲ့ performance ကိုတန်ဖိုး
Pingback: ကျော်လွန် 45? Find A Job Fast By Creating One| | မွေပွငျအောကျလမျး